डाउनलोड Hawaii Photoreal Vol 1 + Vol2+ Vol3FSX र P3D - Rikoooo
हवाई फोटोग्राफिक भो 1 + भो2+ भो3FSX & P3D
आकार 5.77 जीबी
डाउनलोड 105 186
परिवर्तन भयो 30-04-2019
स्वत: स्थापना स्थापनाकर्ता दृश्य V11
लागि FSX स्टीम संस्करण & P3Dv1 P3Dv2 P3Dv3 P3Dv4
लेखक: फ्लाइट सिम ज्वेल्स, जर्ज केई, रे ट्याब्रेचर, चार्ल्स रीड
अपडेट 30 / 04 / 2019:
- वेबसाइटको अनुसार नवीनतम अपडेटहरू https://hawaii-photoreal.com
- अटो-फोन्सहरू "हवाई स्वत: शाकाहारी बीटा" र "हवाई अतिरिक्त सामग्री" थपियो
अपडेट 23 / 10 / 2017:
- 11 संस्करणमा अपडेट गरिएको स्वत: स्थापनाकर्ता
- PATCH3थपियो
- पर्यावरण वृद्धि
- PHBK को आसपास एक पानी को छेद बग फिक्स
बर्किंग रेन्ड एअरपोर्ट
- JHM Kapalua हवाईअड्डा (हवाईअड्डा एयरपोर्ट) र चार्ल्स रीडको स्वत: जेनबीच एक अनुकूलता बग निश्चित।
- V0.95 लाई "बिग आइल्याण्ड" अपडेट गर्नुहोस्। V0.97 लाई "माउ" अद्यावधिक गर्नुहोस्।
अपडेट 11 / 12 / 2015:
- निम्न एड्स थपियो: हावाइज वायुसेना भाग 1, भाग 2, भाग3(जर्ज केग), हवाई 10m जाल (रे ट्याबोरट द्वारा) लैंडक्लस (चार्ल्स रीड द्वारा)।
- PHMK विमानस्थलहरू अपडेट गर्दै मोलोकई, लानई शहर PHNY, PHHN हाना, कलुपापा PHLU, जेएचएम माईई वेस्ट, पीएचजेआर जॉन रोडर्स फील्ड, पीएचबीके बर्किंग रेन्ड्स, एनपीएस फोर्ड आइल्याण्ड, पीएनएनजी केनेई बे, प्रिन्सिलेल, पोर्ट एलेन, विएमा, र अपोलो।
- अद्यावधिकमा भवनहरू, पटरिहरु, ट्राफिक, जनावरहरू, मानिसहरू, ट्रकहरू, फोटो-वास्तविक बनावटहरू, एनिमेटेड वस्तुहरू, ट्याक्सीहरू, रात बनावटहरू र थप समावेश थिए!
- निम्नलिखित द्वीपहरु को नवीनतम संस्करण: निहाहाउ v.1.0, ओआहु v.0.97, v.1.0 कुलाई, लानई v.1.0, v.0.95 माउ, मोलोकई v.0.99, मोलोकिनी v.1.0, बिग आइल्याण्ड v.0.93 ।
- 6.17 जीबी एक मात्रा मा तीन मात्रा मर्ज।
- स्थापनाकर्ता संस्करण 10
यहाँ लुटेच्छाजनक सुन्दरताको पूर्ण फोटो-वास्तविक दृश्यहरू छन्! यो हवाई टापु समूह (अमेरिका) को स्थिति हो। यो मेगा प्याकेजमा टापु सहित तीन अलग-अलग संस्करणहरू समावेश छन् Niihau v.0.99, ओआहु v.0.99, पढौवे वी.0.99, लानई v.0.99, माउ v.0.99, मोलोको v.0.99, Molokini v.0.99, बिग आइल्याण्ड v.0.97। द्वारा बनाइएको उडान सिम आभूषण फ्रीवेयर।
सबै वास्तविक फोटो संरचनाहरू 1m / पिक्सेलमा (मोलोकोई को बाहेक) स्वत: जेन र रात बनावट हो। निस्सन्देह, यो केवल फोटो-वास्तविक दृश्यहरू होइन, तटपट्टि हटाउँदै, कलाकृतिहरू हटाउँदा, रङ र टोन बनावटहरू र धेरै अन्य चीजहरू यो दृश्य धेरै सुन्दर बनाउँदछ।
यसमा "हवाईअड्डा एयरपोर्ट्स" एड्स अनलाईन जर्ज केग र "हवाई अटोगेन सब्जेशन बीटा" र "हवाई अतिरिक्त सामग्री"
यो दृश्यावलोकन फ्रीवेयरमा सबैभन्दा पूर्ण र विस्तृत उपलब्ध छ!
तपाईं पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ प्लस यहाँ संस्करण https://hawaii-photoreal.com/plus-version/
महत्वपूर्ण निर्देशन र डाउनलोड जानकारी
1 यो डाउनलोड धेरै भारी छ 5.77 जीबी तपाईं एक हो भने जंबो सदस्य को डाउनलोड समय को धेरै घन्टा को प्रतीक्षा को अपेक्षा छ। यो दृश्य 8 भागहरूमा विभाजित गरियो। डाउनलोड पछि hawaii_photoreal_vol_1_vol_2_vol_3.zip एउटा फोल्डरमा सबै अनजिप र स्वचालित स्थापना सुरु गर्न hawaii_photoreal_vol_1_vol_2_vol_3.exe क्लिक गर्नुहोस्.
2 तपाईं यो छ यो जस्तै ठूलो फाइलहरू डाउनलोड गर्ने जंबो सदस्य वा छैन, होस् कडा तपाईँको पूर्वनिर्धारित इन्टरनेट एक्सप्लोरर वा Google Chrome वा फायरफक्स ब्राउजर भन्दा डाउनलोड अन्य प्रबन्धक प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको। Rikoooo अत्यधिक यस सूचीमा तपाइँलाई एउटा सफ्टवेयर उपलब्ध गराउनुहोस्। http://www.techsupportalert.com/best-free-download-manager.htm
3 दृश्यहरू स्थापना गर्न पछि, यदि यो तपाईंको सिमुलेटरमा उपस्थित छैन भन्ने मतलब यो हो कि स्वचालित स्थापनाकर्ताले दृश्यावलोकनमा सिम्युलेटरमा दृश्यहरू.cfg फाइलबाट सक्रिय पार्न सकेन। यो समस्याको मुख्य कारण विन्डोज अनुमतिहरू हो, वास्तवमा, केही अवस्थाहरूमा, विन्डोजले दृश्यरीय.cfg फाइल परिवर्तन गर्न स्वचालित स्थापनाकर्तालाई अनुमति दिन अस्वीकार गर्दछ। यदि तपाईं यस अवस्थामा हुनुहुन्छ भने, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ता खातासँग प्रशासक अनुमतिहरू (सम्पूर्ण अनुमतिहरू)।
बडा द्वीप (Kona कोड ICAO: PHKO)
हवाई पनि राज्य संग भ्रम जोगिन ठूलो टापु रूपमा चिनिन्छ। द्वीप अझै पनि बढ्दै र जो एक साथ यसरी टापु बनाउन erupted5ज्वालामुखियों हुन्छन् छ। तर, यी ज्वालामुखियों केही अझै सक्रिय छन्। यी ज्वालामुखियों आउँछ कि लाभा समुद्रमा बग्छ र नयाँ भूमि सिर्जना गर्छ।
MAUI (कोड ICAO PHOG):
माउ हवाई को दोस्रो सबैभन्दा ठूलो द्वीप हो। ज्वालामुखी विनाशहरु द्वारा यस द्वीप को गठन गरियो। यसको कारण, यो एकदम अजीब आकारको हो। माउनी प्रकृति प्रेमीहरूको बीचमा धेरै लोकप्रिय छ। टापुबाट, तपाईं अचम्मलाग्दो सुन्दर पानीको पानीमा हम्पब्याक व्हेल्स वा डाइभिङ्ग वा स्नोर्कलिङ जान सक्नुहुन्छ। धेरै सुन्दर पुरानो गाँउहरु पनि द्वीपमा भेट्टाउन सकिन्छ। ऐतिहासिक शहर Lahaina राम्रो तरिकाले भेट्न लायक छ।
हवाई हवाई मा बाकी जस्तै एक उष्णकटिबंधीय जलवायु छ। पहाडको उपस्थितिको कारण, वर्षाको संख्यामा ठूलो भिन्नता हुन सक्छ। माउको पश्चिमी भागले छेउको छेउमा अवस्थित छ र सुत्ने छ। पहाडबाट पूर्वी यो धेरै गीला छ। पहाडको आकारको कारण, माउ, माकथा माउन्ट वर्थटेक मा एक अनूठा घटना छ। यो घटना माउन्ट हलाकला को उत्तरी ढलान संग पवन को वायु को कारण हुन्छ। यस पर्वतको पश्चिमतिर, माउ सँग टकराउँछ र दक्षिणतिर उडेको छ। किनकि हावा घाँटीमा उत्रिएको छ किनकि छिटो बढ्दै गएको छ। सारांशबाट तलल्लो ब्रेजहरू बादलहरू बुझाउँछन् जसले वर्णन गर्दछ कि किन बारम्बार असामान्य छ।
मोलोकाइ (कोड ICAO PHMK):
मोलोकाइ सबैभन्दा शान्तिपूर्ण द्वीप को छ। किनभने यसको capricious फारम र उच्च भीर द्वीप छैन एक शानदार समुद्र तट गन्तव्य रूपमा धेरै उपयुक्त तट साथ को। तर, द्वीप यो द्वीपसमूह को सबै भन्दा प्रामाणिक र Untouched द्वीप को छ।
मोलोकाइ एक ट्रपिकल जलवायु छ। हावा सधैँ समान निर्देशन आउँछ रूपमा पहाड यहाँ कुनै अनुवात वा windward पक्ष, orographic वर्षा यसैले अभाव छ। वर्षा अधिक समान रूप द्वीप बाहिर फैलाउन छ। सबैभन्दा वर्षा को जाडो समयमा पनि ढले। गर्मीयाम पनि अत्यन्तै सुक्खा हुन सक्छ।
Lanai: (कोड ICAO PHNY)
लानाई एक उष्णकटिबंधीय जलवायु संग एक चट्टान द्वीप हो जसको यसको कम परिशुद्धता र हर वर्ष को सुन्दर सुखद तापमान हो। साताका लागि टापु जनतालाई बन्द गरिएको थियो, आजकल संसारमा सबैभन्दा ठूलो अनानास बिरुवाहरू यहाँ फेला पार्न सकिन्छ। यो टापु भ्रमण गर्न पर्यटकहरूको मुख्य कारण पनि हो। टापुमा केवल एक शहर भेट्टाउन सकिन्छ: लानई सिटी जुन वास्तवमा एक होटल संग सानो निपटान हो।
कालोवे एक छोटो टापु हो। ताजा पेय पानीको अनुपस्थितिको कारण, यो सधैँ असाधारण जनसंख्या भएको छ। इतिहासको दौडान, यस द्वीपमा धेरै उद्देश्यहरू थिए। यो एक पुरुषको सजाय कलोनी थियो, यो एक जनावरको खेतीको रूपमा प्रयोग भएको थियो र सैन्य प्रशिक्षण मैदानको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। आजकल यो द्वीप एक संरक्षण स्थल हो।
Kahoolawe अत्यन्तै कम वर्षा तथ्याङ्कले एउटा ट्रपिकल जलवायु छ। यो हलेयकाला ज्वालामुखी को अनुवात पक्षमा स्थित छ किनभने र केवल तटीय क्षेत्रहरु केही वर्षा प्राप्त यो छ।
बाट चित्रहरू Prepar3D v2.3
ग्रैंड परेडिस इटली - फोटोग्राफिक FSX & P3D
सेन्ट बार्टेलेमी नि: शुल्कका लागि P3Dv4
क्युबेक सिटी 2.0 FSX & P3D
सार्डिनिया फोटोग्राफिक FSX & P3D part3
एण्टोनभ ए-एक्सएनएक्सएक्सवी FSX & P3D
एण्टोनभ ए-एक्सएनएक्स एचडी लिभ प्याक FSX &